လက်ရှိ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဖြစ်ပွားနေသော အငြင်းပွားဖွယ် ကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများက သံတမန် နည်းလမ်းအရသာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းလိုကြောင်း ပြောကြားထားသည့်အတွက် လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေး မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ပါက မလိုအပ်ဘဲ ပြဿနာကို အကျယ်ချဲ့မှုမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွန်းက ပြောကြားသည်။
At 6/02/2014 02:39:00 PM No comments:
ရန်ကုန်၊ မေ ၃၁- တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်အနီး တွင် အင်အားအသင့်အတင့်ရှိသော မြေငလျင် များ ခပ်ကျဲကျဲလှုပ်ခတ်လျက်ရှိရာမှ ရက်ခြား၍ လှုပ်ခတ်လာပါက ငလျင်ကြီးများဖြစ်ပေါ် လာ နိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံမြေ ငလျင်ကော်မတီမှ ဦးစိုးသူရထွန်းက သုံးသပ်ပြောသည်။
မန္တလေးမြေ ငလျင်စခန်း အရှေ့မြောက် ဘက်တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် မြစ်ကြီးနားမြို့၏အရှေ့တောင်ဘက် အနီးတွင် မေလနောက်ဆုံး ပတ်အတွင်း အင်အားအသင့်အတင့်ရှိ မြေငလျင် နှစ်ကြိမ်ခန့်လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဌာန မြေငလျင်ဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန် ထားကြောင်းသိရသည်။
At 6/02/2014 02:13:00 PM No comments:
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လိုအပ်သလို ပြင်ရမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတပြောကြား
ရန်ကုန်၊ မေ ၃၁- နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ လ စဉ် ပြည်သူလူထုထံ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ ရာ မေ ၃၁ ရက်က ပြောကြားခဲ့သောမိန့် ခွန်းတွင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှ သဘောတူ ညီချက်များနှင့် ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သည့်လူ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အတွက် လိုအပ်မည့် ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်း များပြည့်မီလာရန် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့သည်။
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အား အချက်(၃)ချက်ပေါ်မူတည်၍ ပြင်ဆင် ရမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတက မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
At 6/02/2014 02:09:00 PM No comments:
ရန်ကုန်၊ မေ ၃၁- ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးတစ်ပါးက ပညာရေးဌာန မှအရာရှိများကို ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ကျူးလွန်သည်ဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အ ကြောင်းစုံကို ဖြေကြားပေးလိုသည့် ဆန္ဒမရှိကြောင်း အဆိုပါဝန်ကြီးက ဖလားဝါး နယူးစ်ဂျာနယ်သို့ပြောသည်။
ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ်မှ အဆိုပါဝန်ကြီးအား မေ ၃ဝ ရက်က ပညာရေး ဌာနမှ ဆရာများအား ကိုယ်ထိလက်ရောက် ထိုးကြိတ်မှုများဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကို သိလိုသည်ဟုမေးမြန်းခဲ့ရာ ယင်းက အထက်ပါ အတိုင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
At 6/02/2014 01:47:00 PM No comments:
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်တွင် နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် အင်အားဖြည့်တင်းရန် စစ်တပ်နှင့်ရဲတပ်ရင်းများ ထပ်မံစေလွှတ်မည်
ရန်ကုန်၊ မေ ၃၁- မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တွင်ဖြစ်ပွားနေသော နှစ်ဖက်ပဋိ ပက္ခကို နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးအဆင့်(၁) အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ် ရေးရာ လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးကပြောသည်။
ယင်းပဋိပက္ခကြောင့် ယခုအ ခါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား နှစ်ဖက်တင်းမာမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ် ပွား နေပြီး စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများလည်း ပြုလုပ် လာနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
At 6/02/2014 01:36:00 PM No comments:
နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင် မြန်မာစစ်တပ်က မြေမြှုပ်မိုင်းများ ချထားသည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစစ်ဘက် စွပ်စွဲ
မြန်မာစစ်တပ်သည် နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက် ကာ ဘင်္ဂလား-မြန်မာနယ်စပ် တစ်လျှောက် မြေမြှုပ်မိုင်းများ မြှုပ်ထားကြောင်း ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ် စစ်ဘက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင် မေ ၃၁ ရက်က စွပ်စွဲဖော်ပြလိုက်သည်။
မြန်မာစစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့ များသည် နယ်ခြားမှတ်တိုင် ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉ နှင့် ၄ဝ တစ်လျှောက် ကိုက် ၇ဝ မှ ကိုက် ၁ဝဝ အတွင်း အကွာအဝေးအမျိုးမျိုး အတွင်း မြေ မြှုပ်မိုင်းများ ချထားသည်ဆိုသည်။ ယင်း ကဲ့သို့
At 6/02/2014 01:30:00 PM No comments:
လူသေဆုံးခဲ့သည်အထိ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်အကြား ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်ခြားစောင့် တပ်များ မျက်နှာစုံညီ ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုကို ဇွန်လ ၃ ရက်တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှစ် ဖက်လုံခြုံရေးအရာရှိများက ပြော ကြားသည်။
At 6/02/2014 01:26:00 PM No comments:
မြန်မာ-ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနယ်စပ်တစ်လျှောက် RSO သောင်းကျန်းသူ လက်နက်ကိုင် များနှင့် မြန်မာ နယ်စပ်လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား တိုက်ပွဲ များဖြစ်ပွားနေ၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်အနီးရှိ ကျေးရွာများမှ ရွာခံများမှာ မောင်တောမြို့ပေါ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြောင်းရွှေ့လာသည့် ကျေး ရွာမှာ မောင်တောမြို့နယ်မြောက် ပိုင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်အနီး ရချင်းချောင်းကျေးရွာမှ အိမ် ထောင်စုများဖြစ်ပြီး မေလ ၂၉ ရက်က အိမ်ထောင်စုလေးစု၊ လူဦးရေ ၁၈ ဦးမှာ ဝေသာလီ၊ ကန်ပြင်သာစည်နှင့် သရေကုန် ဘောင်ကျေးရွာများရှိ ဆွေမျိုးများ နေအိမ်တွင် ယာယီနေထိုင်နေကြကြောင်း သိရသည်။
At 6/02/2014 01:23:00 PM No comments:
ဘန်ကောက်- ထိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး အမျိုးသားကောင်စီ (NCPO) အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယွတ်ချန်အိုချာ သည် ကြားဖြတ် အစိုးရကို ဖြုတ်ချပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတော်အာဏာပြယုဂ်ဖြစ်သည့် အစိုးရအိမ်တော်ကိုဌာနချုပ်အဖြစ် အသုံးမပြုဘဲ စစ်တပ်ဌာနချုပ်၌သာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းစစ်တပ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယွတ်သည် ရတ်ချာဒမ်နွန်နော့ခ်ရိပ်သာရှိ စစ်တပ်ဌာနချုပ် မှပင် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ထောက်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေ ၃၀ ကျော်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်များ မပါဝင်ဟု နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ပြည်ခိုင်ဖြိုးဘက်က ပါဝင်ပူးပေါင်းတာမရှိပါဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့်
At 6/02/2014 12:39:00 PM No comments:
မန္တလေးတိုင်း၊ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်နေအိမ် ဧပြီလ ၁၉ရက်က မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားစွဲဆိုရန် ရက်ပေါင်း လေးဆယ်ကျော်ကြာမြင့်ပြီး မေ ၃၁ ရက်တွင် မြို့နယ်ဥပဒေရုံးထံသို့ တင်ပြ ထားကြောင်း မန္တလေးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒု-ရဲမှူးကြီး ဦးစိန်ထွန်းက ဇွန်၁ရက်တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
At 6/02/2014 12:34:00 PM No comments:
At 6/02/2014 12:11:00 PM No comments:
အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုတစ်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်တို့ အပြန်အလှန်စကား များတိုက်ခိုက်
ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ဖို့connection မကောင်းသူတွေအတွက် ဘာတွေ ပြောသွားသလဲဆိုတာကို သိရအောင် ပြန်ရေးပေးလိုက်တာပါ။
မနေ့ ည ၁. ၆. ၂၀၁၄ လယ်ဝေး၊ပျဉ်းမနား၊တပ်ကုန်း ၃ မြို့ နယ်ပေါင်းပြီးပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး အတွက် ဒေါ်စုဟောပြောစည်းရုံးပွဲလုပ်ပါတယ်။
ဟောပြောပွဲကအပြန် တပ်ကုန်းမြို့အထွက်နားမှာ ၄၃၆ မပြင်ဆင်ဖို့ ဆန္ဒပြ တဲ့ လူတစ်စုနဲ့ တွေ့ ပါတယ်... ဒေါ်စုကလာခဲ့ပါဆိုပြီး ဘာကြောင့် မပြင်ချင်တာလဲ။
At 6/02/2014 10:51:00 AM No comments:
ဒေသန္တရ မိုင်းဟောင်း နင်းမိပေါက်ကွဲ
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ကျောက်ကြီးမြို့နယ် မီးတိုင်တော ကျေးရွာနေ မျိုးအောင်(ခ) ဖိုးဝ ၃၂နှစ် (ဘ) ဦးတင်မြင့်နှင့် ငပိန် ၂၅နှစ် (ဘ)ဦးခင်မြင့် တို့သည် မေ ၂၈ရက် နံနက် ၆နာရီက လှည်းဖြင့် ဝါးခုတ်ရန် ထွက်ခွာလာရာ နံနက် ၇ နာရီ ခွဲခန့်တွင်
မြောင်ဦး စခန်း၏ အရှေ့မြောက်ဘက် မီတာ ၃ဝဝဝခန့် အကွာသို့ ရောက်ရှိစဉ် လှည်း၏ ညာဘက် ဘီးဖြင့် ဒေသန္တရ နင်းမိုင်းဟောင်း တစ်လုံးအား နင်းမိ ပေါက်ကွဲသဖြင့် ရှေ့သို့ ဆက်မသွားဘဲ မျိုးအောင်(ခ) ဖိုးဝမှ နွားလှည်းအား ဆွဲ၍ ပြန်လှည့်လာစဉ် မီတာ ၂ဝ ခန့် အကွာအရောက်၌ ဒေသန္တရ နင်းမိုင်းဟောင်း တစ်လုံးအား ထပ်မံ နင်းမိ ပေါက်ကွဲသည်။
At 6/02/2014 10:09:00 AM No comments:
At 6/02/2014 10:04:00 AM No comments:
At 6/02/2014 09:38:00 AM No comments:
င်ငံတစ်ဝန်း ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ အစိုးရပိုင် ထက်၊ လယ်၊ မူ ကျောင်းများမှ ဆရာ ဆရာမများ အနေဖြင့် ယခုနှစ် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်တွင် အားကစားကြေး၊ အာစရိယပူဇော်ကြေး၊ ကျောင်း စာကြည့်တိုက်ကြေး၊ စာမေးပွဲကြေး၊ စာရွက် စာတမ်းကြေးကအစ အခြား မည်သည့် အကြောင်းအရာဖိုးမှ ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းသား မိဘများထံမှ ကောက်ခံမှုကို လုံးဝ ခွင့်ပြုတော့မည် မဟုတ်ဘဲ တိုင်ကြား သိရှိပါက ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
At 6/02/2014 09:33:00 AM No comments:
အပြီး ၂ နှစ်ကျော်အကြာတွင် ပြည်ပမှ ကားစီးရေပေါင်း နှစ်သိန်းခွဲကျော်တင်သွင်းပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ထို ၂ နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့၏ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှုမှာလည်း ဆိုးသထက်ဆိုးလာပြီဖြစ်သည်။ ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းပေါ်ယဉ်ကျေးမှုအားနည်းခဲ့သည့် ယာဉ်မောင်းများ၊ စနစ်တကျမရှိသည့် ရန်ကုန်မြို့မှ လမ်းများ၊ ကားရပ်နားစရာ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခြင်းမရှိသည့် ရန်ကုန်မြို့ပြအဆောက်အအုံတည်ဆောက်မှု အားနည်းချက်၊ ယာဉ်ထိန်းအရေအတွက် မလုံလောက်မှုစသည်တို့ကြောင့် ရှစ်သန်းနီးပါးရှိ ရန်ကုန်လူထုမှာ လမ်းမများပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏ တန်ဖိုးရှိသော အချိန်များ ပျောက်ဆုံးနေကြရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ခံ၊ ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်ထိန်းနှင့် ပညာရှင်တို့အသံကို ယနေ့နားထောင်ကြည့်နိုင်ရန်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
At 6/02/2014 09:27:00 AM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်များကို အခြေခံကာ ပေါ်ပေါက် လာမည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ပွဲများမှ ရရှိလာသော ရလဒ်များအပေါ် မူတည်၍ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့သည့် ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းတွင် ယင်းသို့ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်တွေကို အခြေခံပြီး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ပွဲများမှ သဘောတူညီချက်များပေါ်မူ တည်၍ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက် ရေးသားခြင်း များ ပြုလုပ် သင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
At 6/02/2014 09:05:00 AM No comments:
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ပြဿနာများ မပေါ်ပေါက်စေရေး ညှိနှိုင်းရန် နှစ်နိုင်ငံ အလံတင်အစည်းအဝေး မကြာမီရက်ပိုင်းတွင်း ပြုလုပ်မည်
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တွင် ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် မလိုလားအပ်သည့် နယ်စပ်ပြဿနာများ မပေါ်ပေါက်စေရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှစ်နိုင်ငံ အလံတင်အစည်းအဝေးကို မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန် ၁ ရက် ညပိုင်းက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
At 6/02/2014 09:01:00 AM No comments:
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် အခြေပြုပြီး ငလျှင်ငယ် ထပ်လှုပ်.
ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်း ၄ နာရီ ၁၇ မိနစ်က မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ်အနီးက မြန်မာပြည်တွင်းတနေရာကို ဗဟိုပြုပြီး အင်အား ၂.၂ ရှိတဲ့ ငလျင်ငယ်တခု လှုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းမိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒဌာနက တိုင်းတာရရှိခဲ့ကြောင်း မိုး/ဇလ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင်ရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
At 6/02/2014 08:50:00 AM No comments:
ဖြစ်စဉ်မှာ မေလ ၂၇ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ဝန်းကျင်တွင် ယင်းလမ်း မူလတန်းကျောင်းဘေးရှိ နေအိမ် တစ်အိမ်မှ သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးနှင့် ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးသည် လမ်းပေါ်ထွက်ကာ
At 6/02/2014 08:38:00 AM No comments:
မိတ္ထီလာ ပြည်သာယာရပ်ကွက်အတွင်း နေအိမ်တစ်အိမ်ရှိ မွေ့ရာ၊ အ၀တ်အစားများမှ အလိုအလျောက် မီးလောင်
At 6/02/2014 08:18:00 AM No comments:
မေ ၂၈ ရက်က မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး မိုင်တိုင်အမှတ် (၅၂)အနီးတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ လက်နက်ကိုင်နှစ်ဦးသည် မြန်မာနယ်စပ်အနီး ပေ ၈ဝ ခန့်သို့ ချဉ်းကပ်လာပြီး လုံခြုံရေးတာဝန် ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာနယ်စပ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပတ်ခတ်မှု ဖြစ်စဉ်တွင် အဝါရောင်ပြောက်ကျားဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသည့် လက်နက်ကိုင်တစ်ဦး ကျဆုံးပြီး အမ်-၂၂ သေနတ်တစ်လက်၊ ကျည်ကတ်လေးခု၊ ကျည် ၉၈ တောင့် သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
At 6/02/2014 08:08:00 AM No comments: